दाङ पुगेर देउवाले गरे चमत्कारिक भाषण, अब कहाँ होला प्रदेश ५ को राजधानी ? - Rapti Khabar
मुख्य पृष्ठ /मुख्य समाचार/दाङ पुगेर देउवाले गरे चमत्कारिक भाषण, अब कहाँ होला प्रदेश ५ को राजधानी ?
दाङ पुगेर देउवाले गरे चमत्कारिक भाषण, अब कहाँ होला प्रदेश ५ को राजधानी ?
मंसिर ९, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले बुटवल लगेको प्रदेश ५ को राजधानी दाङ ल्याउ नसक्नु कम्युनिष्ट नेताहरुको कमजोरी भएको बताएका छन् ।
दाङ ३ ‘ख’को चुनावीसभामा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले कम्युनिष्ट नेताहरुलाई प्रश्न गर्दै भने– ‘मैले त केही समयका लागि पो बुटवल लगेको हुँ, सँधैका लागि होइन नि ! दाङबाट जितेका नेताहरु सभामुख र मुख्यमन्त्री भएर किन दाङ राजधानी ल्याएनन् ।’ अब राजधानी दाङ ल्याउन आफ्नो पार्टीलाई जिताउन पनि उनले आग्रह गरे ।
‘प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादी होइनन्’
देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवाद समाधानका लागि पहल गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद हल गर्न ठोस पहल गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै देउवाले ओली राष्ट्रवादी नभएको पनि दाबी पनि गरे ।
‘कालापानीमा ओली लम्पसारवादी भइरहेका छन् । त्यसकारण ओली राष्ट्रवादी होइनन्,’ देउवाले भने, ‘राष्ट्रवाद र जनजातिलाई अधिकार दिने नाममा ओलीले भोट लिए न उनीहरूलाई अधिकार दिएका छन्।’
कांग्रेसले महिला, आदिवासी जनजाति, थारूलगायतलाई आरक्षण दिएको पनि उनको भनाइ थियो । ‘कांग्रेसले विधानमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण दिएको छ। सहमहामन्त्री पद आरक्षण दिएको छ। अरू कुन पार्टीले दिएका छन्?,’ देउवाले प्रश्न गरे।
उनले सबैलाई आरक्षण दिएर सबैको पार्टी कांग्रेस बनाएको पनि दाबी गरे। ‘सबैलाई आरक्षण दिएर सबैको पार्टी कांग्रेस बनाएका छौं। आरक्षणको व्यवस्था विधानमै गरिएको छ,’ उनले भने।
कांग्रेस उम्मेदवार जितेको खण्डमा विकास निर्माणका काम अघि बढ्ने पनि उनको दाबी थियो । ‘ओलीले कहाँ बाटो बनाए? उद्घाटन गर्न मात्रै गएका हुन्। बाटो हामीले बनाएको हो,’ देउवाले भने ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, सशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. रामशरण महत, प्रकाश शरण महत, बालकृष्ण खाँड, मोहन बहादुर बस्नेत, दिपक गिरी, उमेदवार केशव आचार्य लगायतले बोलेका थिए ।
निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिका संयोजक खिमबहादु वलीको अध्यक्षताम भएको कार्यक्रमको संचालन कांग्रेस जिल्ला सचिव शंकर डाँगीले गरेका थिए ।